ရခိုင်အရေး ဖြစ်ပွါးသွားခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရခိုင်အရေး ဖြစ်ပွါးသွားခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်း
ရခိုင်အရေး ဖြစ်ပွါးသွားခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်း
Posted by we R one on Jun 7, 2012 in Copy/Paste, Facebook | 23 comments
အခုဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ လူသိများသွားတာက တောင်ကုတ်ကိစ္စကြောင့် … ဂျာနယ်တွေ ဥပဒေတွေ ဝင်လာတာ တောင်ကုတ်ကြောင့် … တောင်ကုတ်က ဖြစ်ရပ်ဟာ တကယ့်ကို အမှားကြီးကြီး ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ … သေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ် … အားလည်း အားနာမိပါတယ် … တစ်ခုတော့ရှိတယ် သေသွားတာကို မလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူး … အဲဒီလုပ်ရပ်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင် ရမ်းဗြဲက မသီတာထွေးကိစ္စက ဒီလိုပဲ လူသူမသိ အမှောင်ချခံလိုက်ရမှာပါပဲ … ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေ လည်း အများကြီးပါ ….
ရခိုင်တွေက မွတ်ဆလင်ကုလားကို မုန်းတီးနေတာ ရန်လိုနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အရင်ဆုံး ပြောပါရစေ … ရခိုင်တွေသာ မုန်းတီးရန်လိုနေရင် ရခိုင်ပြည်မှာ အေးချမ်းတဲ့ နေ့လို့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ဒါပေမယ့် စော်ကားလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ မိမိတို့ကို လုံခြုံမှု မပေးနိုင်လို့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ပဲ တရားရုံးလုပ်ခဲ့ရတာ ကျွန်မသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပါပဲ … ဒါတောင် ကျွန်မက ကျွန်မမွေးပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကိုပဲ သိလို့ ပြောတာပါ …
ကဲ ဖြစ်စဉ်တွေ အားလုံးကို အစကောက်ကြည့်ရအောင် ….
အစကောက်တယ် ဆိုတာနဲ့ အခုလောလောဆယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကို မကောက်ဘဲ … ကျွန်မမွေးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းကို စကောက်ရအောင် မမွေးခင်ကဟာကို ပြောရင် မုသားဖြစ်မှာ စိုးလို့ …. ရင်ထဲမှာ အမုန်းတရားမပါဘဲ အခြေနေကို သုံးသပ်ရေးသွားမှာပါ … ကျွန်မရေးတာတွေ မှန်သည် မှားသည် ရခိုင်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေ … ဟိန္ဒူတွေ လည်း ရှိပါတယ် … ဗမာလူမျိုး ၊ ချင်းလူမျိုးတွေလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ် … သူတို့တွေနဲ့ ပြန်ဆွေးနွေးကြည့်ကြစေချင်တယ် …
ကိုယ့်နေရာ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာမှာ နေပြီး မလုံခြုံမှုတွေကို ခံစားဖူးကြပါသလား … ရခိုင်တွေဟာ အဲလိုမျိုးတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာကြသူပါ … စစ်အစိုးရကိုပဲ ကြောက်နေခဲ့ရတဲ့ လူတွေအတွက် စစ်အစိုးရရော လူမျိုးခြားရန်ရော စိုးရိမ်ခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်တွေကို ဘယ်လိုနားလည်ပေးကြမှာလဲ … စစ်အစိုးရ လက်အောက်ကို ပြန်မသွားချင်သလိုပဲ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာ အမှန် ဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်ပါလျက် လူမျိုးခြားတွေနဲ့ အပြန်အလှန်သတ်ဖြတ် ကျီးလန့်စာစားရတဲ့ ဘဝကို ခုံမင်နှစ်သက်နေကြတယ်လို့ ယူဆပါသလား … ရခိုင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေပါ … ရခိုင်မှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကို လေးလေးနက်နက် သက်ဝင်ယုံကြည်ကြပါတယ် … ရခိုင်သူ ရခိုင်သားတွေထဲမှာ တရားစခန်း မဝင်ဖူးတဲ့လူ သစ္စာလေးပါးတရားကို မနာဖူးတဲ့သူ အရမ်းရှားပါတယ် … ဒီစကားပြောတာက ရခိုင်တွေဟာ လူသတ်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ … ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ တရားတစ်ဖက် ၊ ဓါးတစ်ဖက် နေကြရတဲ့ သူတွေပါ ….
ကျွန်မမှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့ ပဋိပက္ခကနေ စပြောရအောင် … ၁၉၉၂ ကျွန်မ ၇ နှစ်အရွယ်ပေါ့ … အဲဒီတုန်းက ရခိုင်နဲ့ ကုလား အကြီးအကျယ်ကို ဖြစ်တာပါ … စတာက ကုလားက ဝေသာလီဆောင်ကို ဖေါက်ဝင်တာက စတာပါ … အဲဒီကနေစသွားတဲ့ ကိစ္စ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေ ကျောင်းကအိမ်ကို ပြန်ရင် မိဘလာခေါ်မှ ပြန်ရတယ် … မိဘလက်လုပ်လက်စားကလေးတွေက အုပ်စုအကြီးကြီးဖွဲ့ပြီးပြန်ရတယ် … ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားလိုက်ရတယ် … ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းကလည်း ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ဖြေရှင်းကြရတာပဲ … ပြည်မက ဘယ်သူတစ်ယောက်သိခဲ့လို့လဲ … ရခိုင်ပြည်ဟာ အနောက်ဖက်က ကုလားကို ခါးစည်းခံဖို့များထားသလား မှတ်ရတယ် ….
၁၉၉၂ ခုနှစ်က ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်ကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်တားဆီးနိုင်ခြင်း..။ (ကိုယ်တွေ့ကြုံသူတစ်ဦး ရေးသားချက်)
တချိန်တုန်းက ၁၉၉၂-၉၃ လောက်က ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ သူပုန်တွေကို နအဖ အစိုးရတပ်က ပြုတ်လုနီးပါးတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်….သူတို့က ..မောင်တောမြို့နယ် အလယ်သံကျော်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကနေတစ်ဆင့်..လူ ၁၅၀၀ လောက်စက်လှေတွေနဲ့ဝင်လာတယ် လက်နက်မပါပဲနဲ့ပေါ့..ဒီဘက်ကသူတို့အနွယ်တွေဆီကို လက်နက်ကျည်ဆံတွေကား ၇စီးတိုက်စာလောက် ကြိုပို့ထားတယ်လေ
လူနဲ့လက်နက်နဲ့ မတွဲမိခင်မှာ နအဖ စစ်တပ်တွေကပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်း လိုက်နိုင်ပါတယ်
တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ……..ကျောက်ပန်းနု ရွာဘက်က လှိုဏ်ဂူတစ်ခုထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ လက်နက်တိုက်ကိုလဲသိမ်းမိပါတယ်၊ လက်နက်တွေအများကြီးလို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်
အဲဒီတုန်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ကိစ္စ မီဒီယာတွေအေရမ်းအော်ခဲ့ကြပါတယ်….ဘီဘီစီ နဲ့ အာအက်ဖ်အေ အသံအကျယ်ဆုံးပါ…………
ကဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြားထဲမှာ သိပ်ကို မကြီးတဲ့ ဖြစ်ပွါးမှုတွေနဲ့ ရုန်းထွေး နပမ်းလုံးရင်း … ၂၀၀၁ မှာ တစ်ခါ ထပ်ပြီးတော့ ဖြစ်လာတယ် … ကျွန်မတို့က ၁၀ တန်းကျောင်းသူတွေပေါ့ … ဇန်နဝါရီလ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ ပထမဆုံး ကုန်စည်ပြပွဲကြီးကို မြို့တော်ခန်းမ မှာ ကျင်းပပါတယ် … စာမေးပွဲရှိနေတဲ့ ကျွန်မတို့တောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မနက်ဘက် တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်အောင် သွားလိုက်သေးတယ် … စည်လည်းအရမ်းစည်တာကိုး … ပထမဆုံး အကြိမ်လည်းဖြစ် မော်ဒယ်တွေကလည်း ညဖက်ဆို ရှိုးတွေဘာတွေ လျှောက်တော့ စည်တာမဆန်းပါဘူး … သက်မွန်မြင့်တို့တောင်ပါသေးတယ် … စင်ပေါ်ကနေပြီး စွပ်ကျယ်တွေပစ်ပေး၊ ဆပ်ပြာမှုန့်ထုပ်တွေ ပစ်ပေးနဲ့ ဆိုတော့ လူမစဲဘူးလေ … နယ်တွေကတောင် လာကြပါသေးတယ် … အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မက အဘွားအိမ်မှာ သွားအိပ်ရပါတယ် … စာမေးပွဲနီးလာပြီဆိုတော့ အစ်မဝမ်းကွဲက ဂိုက်လုပ်ပေးလို့ … သူတို့မှာလည်း သူတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရယ် အဘွားရယ်ပဲ ရှိတာဆိုတော့ အဖေါ်လည်းရအောင်ဆိုပြီး သွားအိပ်ရတာပါ …
တစ်ည ကျွန်မစာကျက်နေတုန်း ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ သံချောင်းခေါက်သံ အဆက်မပြတ်ကြားရပါတယ် … လမ်းပေါ်မှာလည်း လူတွေအများကြီးပဲ … ဒီလိုပဲ ကျွန်မတို့ဘက်မှာ မီးလောင်ရင် သံချောင်းခေါက်ရင် လူတွေ အကုန်လုံး လမ်းတွေပေါ်ကိုဆင်း ယောက်ျားတွေက ကား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ ဆိုက္ကားတွေနဲ့ လိုက်သွားတတ်ကြပါတယ် … တခါတလေ မီးသတ်ကားမရောက်ခင်မှာ ဝိုင်းပြီးငြိမ်းသတ်ပေးတဲ့ လူတွေကြောင့် မီးငြိမ်းသွားရတာ များပါတယ် … အဲဒါကြောင့် မီးလောင်ရင်တောင် မီးသတ်ကို အားကိုးတဲ့ အကျင့်သိပ်မရှိတော့သလိုပဲ … မီးသတ်ဆိုတာ ရယ်စရာတစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေတာ … ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်စောင့်ရှောက်ရင်း နေလာကြတာပါ …
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာ ထွက်သွားတဲ့ လူတချို့ ချက်ချင်း ပြန်လာပြီး မိန်းမတွေနဲ့ ကလေးတွေကို အ်ိမ်ပေါ်ကို တက်ခိုင်းပါတယ် … လမ်းမှာ မနေနဲ့ အိမ်ပေါ်ကိုတက် တံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ထား ဆိုတဲ့ မှာသံတွေနဲ့ အတူ “ဟိုမှာ ရခိုင်နဲ့ ကုလားဖြစ်နေကြပြီ … ဘာသံပဲကြားကြား ကိုယ့်အ်ိမ်ထဲက မထွက်နဲ့တဲ့” … ကျွန်မအမေဆိုရင် သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ … ကျွန်မက အဘွားအ်ိမ်မှာမို့လို့တဲ့ စိုးရိမ်လို့ ထိုင်ငိုနေခဲ့တာ … ဖြစ်တာကလည်း အဘွားအ်ိမ်နဲ့ဆို လမ်းတွေ သိပ်မဝေးဘူးကိုး … တစ်ညလုံး မအိပ်ကြပဲ လမ်းက အသံတွေကိုပဲ နားစိုက်နေခဲ့ကြတာ … အဲဒီအချိန်တွေတည်းက ဥပဒေနဲ့ ဝင်ထိန်းလိုက်ရင် သိပ်ဆိုးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး … မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း အိမ်ကို တန်းပြေးရတယ် … အဲဒီအချိန်မှာမှ သိလိုက်တာက ကုန်စည်ပြပွဲ နောက်ဆုံးညဆိုတော့ ၁၂ နာရီလောက်အထိ လူတွေ မစဲဘူးတဲ့ … ကောင်လေး နှစ်ယောက် ၊ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် နဲ့ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ညဖက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ ပွဲကြည့်ရင်း တူတူပြန်ကြတာ ကုလားရွာက ဖြတ်ပြန်ရတော့ ကုလားတွေက ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို သားပြော၊ မယားပြော လှမ်းပြောလို့တဲ့ … ကုလားရွာက ဖြတ်ပြန်ရတယ် ဆိုလို့ ပြောဦးမယ် … စစ်တွေမှာ ကုလားရွာ တော်တော်များများက အဓိက လမ်းကြီးတွေပေါ်မှာ ရှိတယ် .. နည်းတဲ့ ရွာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး … ပြီးရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံရှေ့တည့်တည့် Main လမ်းမဖြစ်တဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်း ဗလီအကြီးကြီး နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး … အဲလို ကောင်မလေးတွေကို ပြောတော့ ကောင်မလေးတွေက ပြန်ဆဲလို့တဲ့ ဟိုက ပိုရိုင်းလာတော့ ကောင်လေးတွေကပါ ဝင်ပြောတော့ ကုလားရပ်ကွက်မှာ အဲဒီလူခြေပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ သူတို့တွေက ဆွဲလားရမ်းလား လုပ်တာနဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်၊ ကိုရင်လေး နဲ့ ဆွဲနေကြချိန် ကောင်မလေးတွေက ထွက်ပြေးသွားကြလို့ လွတ်သွားပါတယ် … သူတို့ကလည်း ကောင်မလေးတွေကို အာရုံမစိုက်တာလည်း ပါပါလိမ့်မယ် … ကောင်လေးနှစ်ယောက်က နယ်က ကျောင်းလာတက်တာပါ … ရွှေစေတီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေပြီးတော့ ကျောင်းတက်နေကြတာပါ … ဖြစ်ချင်တော့ စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီး ခရီးလွန်နေချိန် ဖြစ်နေလို့ ခုလို ညဖက်ကို ခိုးထွက်လို့ ရကြတာပါ … အဲလို ထိုးကြိတ်ရင်းနဲ့ သူတို့ရွာထဲကို ဆွဲသွင်းရာက ကောင်လေးတစ်ယောက် လွတ်သွားပါတယ် … ကောင်လေးကလည်း ပွဲဖက်ကိုသာ ပြန်ပြေးရင် ပိုကောင်းသွားမှာပါ … လူတွေ အများကြီး လိုက်လာနိုင်ကြမှာ … ဒါပေမယ့် ကောင်လေးလည်း ကိုယ်လွတ်ရာပြေးရင်း ရွှေစေတီကျောင်းကို ရောက်သွားပါတယ် …
ရွှေစေတီကျောင်းဟာ အကြီးဆုံး စာသင်တိုက်မို့လို့ ကိုယ်တော်တွေ ကိုရင်တွေ အများကြီးပါပဲ … အဲဒီမှာ ကောင်လေးက ကိုယ်တော်ကို သွားလျှောက်တော့ ကိုယ်တော်တွေရော ကိုရင်တွေရော လိုက်လာခဲ့ကြပါတယ် … ပြီးတော့ အဲဒီနားမှာ လူသွားတောင်းတယ် … တစ်ယောက်မှ ဘာမှ မပြောကြဘူး … ဆွဲသွင်းသွားတဲ့ အဆောက်အဦးထဲကို ဝင်ရှာတယ် … ပြီးမှ ကိုရင်လေးခေါင်းကို ချိတ်ထားတာတွေ့ပါတယ် … ခန္ဓာမတွေ့ပါဘူး … ဒီလိုနဲ့ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ရာက ကုန်စည်ပြပွဲက လူတွေလည်း ရောက်လာပြီးတော့ အိမ်တွေကို ရှာကြတယ် … မတွေ့ပါဘူး … အဲဒီမှာပဲ ဒေါသတွေ ထွက်ပြီးတော့ ကိုရင်လေးခေါင်းကို တွေ့တဲ့ အဆောက်အဦးကို မီးရှို့ကြတာပါ … အဲဒါ မိုးအလင်း ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက်ချကြတာ …
ငရဲကျနေသလိုပါပဲ … လူတွေရော ဘုန်းကြီးတွေရော … သူတို့ဘက်ကလည်း ရှိသမျှလူတွေပေါ့ … ရတဲ့ လက်နက်နဲ့ဆော်ကြတာ … ရခိုင်တွေက ကလေး၊ မိန်းမ နဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို မသတ်ပါဘူး … ဒါပေမယ့် သူတို့က တွေ့သမျှသတ်တယ် … ပြီးရင် သူတို့မိန်းမတွေက သူတို့အိမ်တွေပေါ်ကနေ ပုလင်းကွဲတွေ ပစ်ချကြတယ် … ကိုယ်တော်တွေလည်း ခေါင်းကွဲတဲ့သူကွဲ … ဆီတွေလောင်းကြတယ် … မီးတွေ ပစ်ကြတယ် … ဒီတော့ ဒီကလည်း သူတို့ အ်ိမ်တွေပေါ်ကို ဆီဗုံးတွေနဲ့ မီးကွင်းတွေ ပြန်ပစ်ကြတယ်ပေါ့ … အဲဒီအချိန်တွေမှာ ကျွန်မတို့ ဘယ်ကတရားဥပဒေကိုသွားပြီး အားကိုးရမှာလဲ … တရားဥပဒေလာဖို့ အသေခံစောင့်နေရမှာလား … ပြီးမှ စစ်တပ်က ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီး လော်စပီကာနဲ့ အော်လို့ သူ့ကို နှစ်ဘက်လုံးက ဘယ်ကထုမှန်းမသိ နဖူးထိသွားတယ် … တပ်တွေလည်း ဒီအတိုင်း ကားရပ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ အခြေနေဖြစ်သွားတယ် … သူတို့တွေလည်း ရခိုင်ရွာတွေကို မီးတိုက်တယ် … ကျွန်မတို့ အဘွားအိမ်ပါသွားလို့ ပြေးကြရတယ် … ဆွေမျိုးတွေ အ်ိမ်တွေလည်း ပါသွားတယ် … ရက်ကွက်လိုက်ကြီးတွေ ပျက်စီးသွားတာ …သူတို့ ရပ်ကွက်တွေရောပေါ့ …
ကြောက်စရာကောင်းအောင် တွေ့လိုက်ရတာက … သူတို့ရဲ့ ဒေါ်လာဆိုတဲ့ အထင်ကရ တည်းခိုခန်းမှာ လက်နက်သေတ္တာတွေ တွေ့လိုက်ရတာပဲ … ငွေစက္ကူတွေ ဒေါ်လာတွေ အများကြီးပဲ … ဘုန်းကြီးတွေက အကုန်မီးရှို့ဖျက်စီးပစ်လိုက်တာ … ပိုင်ရှင်တွေက အဲဒီနေ့မှာပဲ မော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့ ညတွင်းချင်း ထွက်ပြေးကြတာ …
အဲဒီဟာကိုသာ မတွေ့လိုက်ဘူးဆိုရင် တွေးတောင် မတွေးရဲဘူး … နောက်တစ်ရက်မှာ တပ်က မာရှယ်လောထုတ်လိုက်တယ် … ညဖက် ၆ နာရီ အပြင်ကို မထွက်ရ …အဲဒီအတွက်လည်း တရားဥပဒေနဲ့ လုပ် မလုပ်လည်း မကြားရ မသိရ …
ရခိုင်ပြည်ဟာ ရေကြောင်းခရီးကို အဓိက အားထားရတဲ့နေရာ … ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေတော့ လှိုင်းလေ အရမ်းကြမ်းတယ် … ကုလားတန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး နေ့တိုင်းသွားပြန်နေရတဲ့ လူတွေ ရှိတယ် … အဲဒီမှာ မုန်တိုင်းမိပြီး မှောက်သွားတဲ့ မော်တော်က အဘွားကြီးနဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်က ဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့ ပိုက်လောင်းလေးကို အကူညီတောင်းတော့ ကုလားတွေ ငါးသွားဖမ်းတာဖြစ်နေတယ် … သူတို့လည်း လောင်းပေါ်ကို ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ပါလာတဲ့ အဘွားကြီးကို လည်ပင်းလှီးသတ်ပြီး ရေထဲကို ချပလိုက်တယ် … မိန်းမကြီးကိုတော့ အဓမ္မကြံပြီးမှ ဝတ်ထားတဲ့ နားကပ်တို့ လက်ကောက်တို့ ဆွဲကြိုးတွေကိုယူ လည်ပင်းကို ဖြတ်ပြီးမှ ပစ်ချလိုက်တယ် … မြင်သွားတဲ့ တခြားလှေက လူတစ်ယောက်အသတ်ခံရပြီး နောက်တစ်ယောက်လွတ်သွားလို့ ပြန်တိုင်တယ် … ဒါလည်း ဖမ်း မဖမ်း မသိရဘူး … ဒီလိုမျိုး အားကိုးရတဲ့ တရားဥပဒေနဲ့ ကာကွယ်ပေးထားတာပါ …
ကျွန်မတို့မှာလည်း ကိုလဂွန်းအ်ိမ်တို့လိုမျိုး သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပါတယ် … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် အစ္စလာမ်ပေမယ့် ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမကို ရှိခိုးတယ် … ကျွန်မတို့ ဘုရားရှိခိုးရင် လက်အုပ်လေးချီထားတယ် … သူ့အိမ်မီးလောင်တုန်းက ရခိုင်တွေကပဲ ငြိမ်းပေးခဲ့ကြတာ … သူတို့ မောင်နှမလေးယောက်လုံးကို ကျွန်မတို့တွေ အရမ်းချစ်ကြပါတယ် … တခြားကောင်လေး ၃ ယောက်ရှိပါသေးတယ် … ကျောင်းကထိန်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းက သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ပဒေသာပင်တွေ သွားယူကြတာ … ကျွန်မတို့ ဘုရားကို ဝတ်မပြုရင်သာနေမယ် … အရှင်ဘုရားတွေ ဆိုရင်လည်း လေးလေးစားစားနဲ့ ပြောတတ်တယ် … ကျွန်မတို့ကို မရိုင်းရင် ကျွန်မတို့ကို မစော်ကားရင် ကျွန်မတို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မလုပ်ပါဘူး … ကျွန်မတို့ကလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာကို မုန်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး … ကျွန်မတို့မှာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှာ နေပြီး ကိုယ့်မြေဖြစ်ပါလျက် အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ ဘဝကို ကျော်ဖြတ်လာကြတာပါ … အဲလိုအချိန်တွေမှာ လာကယ်မဲ့ ရဲတွေကို စောင့်နေရင် ကျွန်မတို့ ဘဝတွေ ဘာဖြစ်သွားကြမလဲ … ရပ်ကွက်ထဲက ယောက်ျားငယ်လေးတွေက အုပ်စုလိုက် အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ရင်း ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကို ကိုယ်စောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြတဲ့ အကြိမ်တွေ ရေတွက်လို့ မရပါဘူး …
ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာမှာ နေပြီး မလုံခြုံတဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးကြပါလို့ အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူး … ခုလည်း ရမ်းဗြဲမှာ မသီတာထွေးကို သတ်တဲ့ကိစ္စကို ဘာတစ်ခုကမှ အသိအမှတ်ပြုလုပ်ပေးတာမျိုးမရှိဘူး … လူတွေတောင် မသိကြဘူးလေ … တောင်ကုတ်က လူသတ်မှုပေါ်မှ သိသွားကြတာ … တောင်ကုတ်ကကိစ္စအတွက် ထိခိုက်ဝမ်းနည်းရပါတယ် … သေသွားတဲ့သူတွေ အတွက်ရော … ကျွန်မတို့ကို ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ ယူဆပြီးကျူးလွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ညီကိုမောင်နှမတွေကိုရော … အရမ်းကို ထိခိုက်ကြေကွဲရပါတယ် … ဒါပေမယ့် အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုက ရခိုင်ဒေသကို ဥပဒေ အမှောင်ချထားလို့ မရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ …
ကျွန်မတို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက တကယ်ကို ရိုးလွန်းလို့ ဒေါသကိုထုတ်ပြ လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာ … ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြေးလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ရပ်သွားမှာကိုလည်း သူတို့တွေ မသိလောက်အောင်ကို ရိုးကြ နုံကြ အကြတာ … သူတို့ အမျိုးသားရေးကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ အရိုးခံစိတ်တစ်ခုပဲ ရှိတယ် … အလိမ္မာ မရှိကြဘူး … ပရိယာယ်မရှိကြဘူး … ကျွန်မသာဆိုရင်တော့ အဲသလိုမလုပ်ဘူး … ကိုယ်လုပ်စရာမလိုဘဲ သူ့စားရိတ်နဲ့သူသွားအောင်ပဲ လုပ်မယ် … ဒါပေမယ့် ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ … ” ကျွန်မတို့ သွားနေကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်စေတဲ့ အတွက်ရော … လူ့အသက်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ရော မုန်းတယ် … ပြီးရင် သူတို့တွေ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်မိသွားတာမို့လို့ သနားတယ် … နောက်ဆုံး အကာအကွယ်မရှိတဲ့ကျွန်မတို့တွေအတွက် သူတို့တွှေကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်မိတယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ် … “
သူတို့လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး … လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ် … ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတိုင်း ပြစ်ဒါဏ်ကို ခံကြရမှာပါ … ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ဘာတွေကြောင့်လဲ … ကျွန်မတို့ ဒေသမှာ တရားဖြစ်လာရင် တကယ်အပြစ်ပေးလ်ိမ့်မယ်လို့ မယုံကြည်နိုင်ကြတော့လို့ပဲ … တကယ့်ကို တရားဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ပဲ … ရခိုင်တွေက အချင်းချင်းပဲ စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမကို လူမျိုးခြား လက်ထဲကို မရောက်သွားရအောင် ကာကွယ်လာကြရတဲ့ဘဝ … ဒါတွေကြောင့်ပဲ ကုလားနဲ့ ရခိုင်လက်ထပ်တာမျိုး မရှိသလောက်ရှားတာ … အနောက်ရိုးမမှာ ရခိုင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ကုလားတွေ စိမ့်ဝင်မသွားဖို့ မြေခံကတုပ် အနေနဲ့ ခံပေးနေကြရတယ်ဆိုတာကို သိရင် …
ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဝေးပြီး ရခိုင်မြေမှာ ရခိုင်တွေတည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားတွေကို ရခိုင်တွေ စိတ်အေးလက်အေး ရှိခိုးရမယ့် နေ့တွေကို တောင့်တရင်း …. ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ ခိုကိုးရာမဲ့သောဘဝက အကာအကွယ်မဲ့သောဘဝက၊ ကိုယ့်အ်ိမ်မှာ ကိုယ်နေရင်း ကြောက်လန့်နေရတဲ့ ဘဝက၊ သံသယတွေနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းရတဲ့ ဘဝက တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း …
( မှတ်ချက်။ ။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ … ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အမှောင်ချခံထားရတဲ့ အခြေနေကို လှစ်ဟပြရုံသက်သက်သာ … တခြားသောသူတွေ ဒီကိစ္စကို ပြီးစေ ငြိမ်းစေချင်တာထက် ရခိုင်တွေက ပိုတယ်ဆိုတာကို သိထားစေချင်ပါတယ် … ရခိုင်ဒေသမှာ အဓိက ဖြစ်နေတော့ မိသားစုတွေ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အတွက် ရတက်အေးကြပါ့မလား … ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ … )
အကောင်း အဆိုး ၊ အကြောင်း အကျိုး ဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်စွာဖြင့်
်Facebook မှ ကူးယူ ဖော်ပြ ပါသည်…။
three colors says:
ကိုယ့် တိုင်းရင်းသားတွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဖြစ်ရင် ကာကွယ်ပေးသင့်ပါတယ်၊ဒီနေရာ က ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါ၊ စစ်တပ်နဲ့ ကာကွယ်မှဖြစ်မှာပါ၊ မဟုတ်ရင် ရခိုင်တွေ စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာကွယ်ကြပေတော့။
အခု အမျှော်အမြင်ရှိသူတွေကလဲ ကြီးမယ့်မီးတောက်ကို အရင်ငြိမ်းနေကြတာပါ..
အဲဒါကိုလဲ နားလည်ပေးကြပါ လို့….
ဥပမာ အရှင်ဝီရသူ လိုပေါ့……
ဦးဦးပါလေရာ ပြောတဲ့အတိုင်းပါဘဲဗျာ ။
မဝီအာဝမ်း ရဲ့ ပို့ စ်ကိုလဲ ကျေးဇူးပါဘဲ ။
အထက်ပါ အခြေအနေများ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ဖြစ်နေကြောင်းကိုထောက်ခံပါတယ်။94 ကနေ 96 ခုနှစ်ကုန်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်တာဝန်နဲ့နေခဲ့ဘူးလို့ပါ။ကျွန်တော့အမြင်ကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှူ့မရှိတာ၊ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်မှူ့မရှိတာတွေရဲ့ အကျိုးဆက်လို့ထင်ပါတယ်။အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊သက်ဆိုင်ရာလူမှူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပြီးစနစ်တကျထိရောက်လျင်မြန်စွာမဖြေရှင်း နိူင် သရွေ့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ အဖြစ်အပျက်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလိမ့်မည်။
လက်မ very very BIG ထောင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရခိုင်ကို စစ်တပ်လွှတ် ဖြေရှင်းသင့်တာကြာပါပြီ။
ကိုယ့် ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တွေ ဘက်ကနေပဲကာကွယ်ပေးသင့်တာပါ။
သူတို့ ခံရပြီဆို ဖင်ပြဲအောင်အော်ကြတယ်ဗျ။
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ … (လုံးဝထောက်ခံတယ်)
၁) မုဒိန်းကျင့်အသတ်ခံရတဲ့.. ရခိုင်မလေးရဲ့. ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကို.. မြန်မာမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေ.. ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေက.. တောင်းပန်ရပါမယ်..။ နစ်နာကြေးကြေနပ်သည်အထိပေးရပါမယ်.
အပြစ်ထင်ရှားရင်.. တရားရေးအရဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း.. မြန်မာတိုင်း(မြန်မာတိုင်း) လိုက်နာလက်ခံရပါမယ်..
၂) တောင်ကုတ်က.. ဒေသခံဘုန်းတော်ကြီးများအပါအ၀င် ရပ်မိရပ်ဖတွေကလည်း.. လူအုပ်စုနဲ့ လူသတ်ခဲ့တာအတွက်.. အသတ်ခံရသူများရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိဘဆွေမျိုးများကို ကိုယ်စားပြုတောင်းပန်ရပါမယ်.။ သေဆုံးသွားသူတွေကို ထိုက်သင့်တဲ့လျှော်ကြေးပေးရပါမယ်။
လူအုပ်စုတခုလုံး လူ ၃ရာ-၄ရာလောက်လို့သတင်းထဲဖတ်ရတာမို့.. တရားခံအစစ်ရှာဖို့ခက်ပါတယ်..။ ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရပါမယ်။ လူအုပ်စုကိုစည်းရုံးခေါ်လာသူ၊ ပြင်ဆင်ပေးသူ၊ ကားပေါ်အရင်ဆုံးတက်သူ စသဖြင့် တရားခံတွေရှာပြီး တရားဥပဒေကြောင်းအရရင်ဆိုင်ခိုင်းရပါမယ်..။
တခုချင်းအလိုက်.. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ပြီး.. ရှင်းသွားရမှာပါပဲ..။
ဖြစ်နိုင်ရင်..ရခိုင်ပြည်အတွက်.. လ၀က.. ရဲနဲ့..စစ်တပ်အင်အား ၂ဆတိုးလိုက်ပြီး.. ဖြေရှင်းစေချင်တာပါ..။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ဘီလီယန်ချီရှာပေးနေတဲ့ ပြည်နယ်ဖြစ်တာမို့.. ဒေသတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို နိုင်ငံအဆင့် ငွေကြေးများများသုံးစွဲလုပ်သင့်ပါတယ်..။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကို.. အထူးအဆင့်ထားပြီး ပြည်နယ်အဆင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးသစ်တွေနဲ့ ကိုင်တွယ်သင့်တယ်..။
kai ၏သုံးသပ်ချက်ကို လေးစားမိတယ်ဗျာ။
ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ … ” ကျွန်မတို့ သွားနေကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်စေတဲ့ အတွက်ရော … လူ့အသက်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ရော မုန်းတယ် … ပြီးရင် သူတို့တွေ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်မိသွားတာမို့လို့ သနားတယ် … နောက်ဆုံး အကာအကွယ်မရှိတဲ့ကျွန်မတို့တွေအတွက် သူတို့တွှေကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်မိတယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ် …
ရင်ကိုထိတဲ့ စာသားပါဗျာ …
ရခိုင်ပြည်မှာ ဒီလောက်ထိဆိုးဝါးစွာဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်၊ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ထင်မထားမိဘူး။ ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ပြီး
စိတ်မကောင်းလွန်းလို့မျက်ရည်တောင်လည်မိပါတယ် ။ ရခိုင်ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေ အေးချမ်းတဲ့၊ မိမိမြေ
မှာ လုံခြုံပြီး စိတ်သောက ကင်းဝေးစွာ နေနိုင်တဲ့နေ့ကို အမြန်ရောက်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းရင်း။
Bamar and Rakhine is the same. I heard the history that ancient bamar is called Rakhine Gyi.
I think, it needalot of police battalions to protect our national.
ရင်ကိုတော်တော်လေး ထိခိုက်စေတဲ့ post လေးပါ။ post ပိုင်ရှင်ရေ။ အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ။ ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သားတွေ ဘေးကင်းကြပါစေဗျာ
အဖြစ်အအပျက်တွေက ဒီထက်မက ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် ရှစ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန် ရင်နာစရာ
အဲဒီ အထဲမှာ ဒီကောင်တွေ ဘယ်လောက်အထိ ပတ်စက်သလဲဆိုရင်
ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ ဒီကောင်တွေနဲ့ အဓိကရုန်းဖြစ်တော့ ရွာတစ်ရွာက ရခိုင်သားအဖ ကို
နှိပ်စက်ပါတယ်။ ဖအေကို တိုင်မှာကြိုးနဲ့ပြီး ဖအေရဲ့ ရှေ့မှာ
သမီးကို အဲဒီခွေးကောင်၃၀ လောက် တစ်ယောက်တလှည့်စီ မသေမချင်း
ဖအေ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကဲ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ကြစမ်းပါ။
နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်သမျှ အဓိကရုန်းတိုင်းမှာ
ဒီကောင်တွေဘက်က ရန်စ တာချည်းပါပဲ။
အဲဒါကြောင့် ဒီကောင်တွေကို ဘာတောင်းပန်စရာမှ မလိုဘူး။
မျိုးချစ်စိတ် အပြည့် မျှတသည့် အရေး အသား ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံ သွားပါသည်။
ရခိုင် မှာ လူမသိ သူ မသိ ဖုံးဖုံး ဖိဖိ နဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ အမှု တွေ ထဲ က လက်လှမ်း မီ သလောက် ကို ပဲ စာရေး သူ က ချပြသွားတာ နော်။
ဖုံးဖုံး ဖိဖိ နဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ အမှု တွေ ကို ဆန်းစစ်ရင် ဒင်းတို့ မကောင်းတာ၊ ဒင်း တို့ လာဒ်စား လို့ ဖြစ်ရတာ။ ငွေဘယ်လောက်ပေးပေး အရေး မစိုက် ပဲ တရားဥပဒေ သာ တကယ် စိုးမိုးခဲ့ မယ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် လာဒ်ပေး လာဒ်ယူ မရှိ ခဲ့ ဘူး၊ အမှု မှန် ဖော် ပေး ခဲ့ မယ် ဆိုရင် ခု လို ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဖူး။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်ဗျို့။ အခုလို ပြောတော့လဲ ဟုတ်ပေသားပဲ။ ဒါပေမယ့် လူသတ်တာကို တော့မထောက်ခံပေမယ့် အဲဒီကောင်တွေက တချို့(အရေအတွက်တော်တော်များများ) မှာ အဲဒီလိုစိတ်ရှိ တာလဲအမှန်ပဲ။ ဘယ်လိုတောင် ပြောရမယ်မှန်း မသိတော့ဘူး။ အဲဒီဘက်က ဆွေတွေမျိုးတွေက အားလုံးထဲမှာ ခေါင်းအမာဆုံး လက်ပေါက်အကပ်ဆုံးလို့ ထင်ရပေမယ့် တချို့နေရာတွေ ကျတော့လည်း တော်တော့်ကို အားကိုးရတယ်ဗျ။ ဒီကိစ္စမှာတော့ ကြားနေမှ ထင်တယ်။
ကျွန်တော် အဓိကရုန်းတွေထဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ ဓါတ်ပုံတွေတင်မပေးတာပါ။
ဗမာ ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်ထားတာတွေ၊ရခိုင်တွေကို သတ်ထားတာတွေ၊
အမျိုးသမီးတွေကို သတ်ထားတာတွေ၊အားးးးးး အများကြီးပဲဗျ။
တော်တော်ရက်ရက်စက်စက်ကို လူမဆန်စွာ ကျူးလွန်ထားကြတာကိုးဗျ။
တစ်ယောက်တည်းမကြည့်ရဲလို့ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ ၀ိုင်းကြည့်တာတောင် တစ်ဝိုင်းလုံး
(ကျွန်တော် အပါအ၀င်) ထထွက်သွားကြရတယ်။
အဲလောက်တောင် ရက်ရက်စက်စက် လူလူချင်းကျူးလွန်လိမ့်မယ်လို့ စိတ်ကူးထဲတောင် တွေးမရဘူး။
ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာကို မုန်းတာလဲ လာမေးရင် တစ်ခွန်းထဲဖြေလိုက်ပါ့မယ်။
(လူမဟုတ်လို့ လူမဟုတ်လို့ဗျို့ )
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး တော်တော်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ် … ယောက်ကျားတန်မဲ့ မျက်ရည်များပင်လည်မိပါတယ် … တော်တော်ကို ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါ .. မသိသေးတဲ့သူတွေ အားလုံး သိသွားစေချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ ကျောက်ဆည်ကလည်း ရခိုင်လိုပါပဲ အရေးအခင်းဖြစ်ဖူးတော့ ကိုယ်ချင်းစာနာမိပါတယ် … နောက်ဆုံးတော့မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ သူတွေ ထောင်ထဲရောက်သွားတာပါပဲ … ငြိမ်းချမ်းရေးကျောင်းဆရာတော်ကို ကုလားတွေ ရက်ရက်စက်စက် သတ်တော့ ဗမာတွေ ဘာမှပြန်မလုပ်တာကို တော်တော်ရင်နာလို့မဆုံးပါဘူး … စစ်တပ်ပဲ အဲဒီရွာကို ကာကွယ်သွားပါတယ် .. သူတို့လဲလိုက်တာက အကျိုးရှိတယ် လူမိုက်နဲ့ ရဟန်းနာ ဆရာတော်နဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါ … အဲလိုမျိုးကျတော့ ခွင့်လွှက်နေရမှာလား …. မြင်လိုက်ရတဲ့ကုလားတွေတောင် ဗုဒ္မဘာသာထဲ ၀င်ပြီး ၀က်သားနဲ့ အလှူကြီး ပေးသေးတယ် … ဒါတကယ့်အဖြစ်ဗျ … အားနာရင် ခါးပါမယ် ..ပြောမှသိမယ့်သူတွေကို ပြောရမယ် … မပြောရင် ခင်ဗျားတို့ အ လို့ပဲ … ပို့စ် ရေးသားသူကို အားပေးလျက်ပါ …. နားလည်လျက် …..
အင်း..အခုလိုအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီကိုယ်ဝန်ကြီးပျက်စီးသွားမှာဆိုးလို့ အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမျိုးရေးပြသနာသတင်းဆောင်းပါး
ကျနော်ဟာ..ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမှမပါဝင်ခဲ့တဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ..အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးသလိုမျှတမှုကိုလဲလိုလား
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာသာတည်မြဲဖို့နဲ့ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကို ဘယ်လိုရုန်းကန်နေကြ
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတစ်ယောက်က ရခိုင်ရပ်ကွက်ထဲကိုသာမာန်ဝင်ထွက်သွားလာလို့ ဘာအန္ဒရယ်မှမဖြစ်နိုင်ပေမယ့်..
ရခိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ က ဘင်္ဂါလီတွေနေတဲ့ရွာထဲကို သွားမိလို့ ဘယ်တော့မှပြန်ထွက်မလာနိုင်တော့တဲ့
ဒါတွေဟာ လူမသိသူမသိအဖြစ်တွေပါပဲ..အဲ့ဒီလိုအဖြစ်အတွက် ဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ဖို့ရဲစခန်းကို
အားကိုးလို့ရမရဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲသွားရောက်ထောက်လှမ်းကြပေါ့ဗျာ..တပ်မတော်ဆိုတာကကော အားကိုးရသလား
တာဝန်ကျတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်လူမျိုးအချို့နဲ့ ပြသနာဖြစ်ဖူးတာကိုအကြောင်းပြုပြီး တပ်ပြောင်းရမယ့်ည ညနက်တဲ့အချိန်မှာ
ကင်းလှည့်ရင်းလမ်းမှာတွေ့တဲ့ရခိုင်တွေကို ဘက်နက်(လှံစွပ်)နဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့တာကိုလဲ မိုးလင်းတဲ့အခါလူကြီးတွေပြောတာကြားလို့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးဦးရေ။ ရခိုင်ဆိုတာ မြန်မာ့နယ်နိမိတ်ရဲ့ အဓိက ခံစစ်သမားတွေဆိုတာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး သိပြီးသားပါ။ အသိဥာဉ်မဲ့တဲ့၊ အမျိုးစောင့်တရားကင်းတဲ့၊ ခွေးတစ်ကောင်လောက်တောင် ကျေးဇူးမသိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား၊ အာဏာရှင် ဗမာတချို့တွေကြောင့် ရခိုင်ပြည် အခုလို ပြသနာတွေကြုံနေရတာပါ။ တွေးမိတိုင်းလဲ အသဲနာမိပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးများအနေနဲ့လဲ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအများစုဟာ ရခိုင်လူမျိုးများဘက်က အမြဲရပ်တည်နေမယ်ဆိုတာ သိရှိပြီး ဗမာအားလုံးကို မမုန်းမိစေဖို့ သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းပါတယ် “ကျွန်မတို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက တကယ်ကို ရိုးလွန်းလို့ ဒေါသကိုထုတ်ပြ လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာ … ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြေးလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ရပ်သွားမှာကိုလည်း သူတို့တွေ မသိလောက်အောင်ကို ရိုးကြ နုံကြ အကြတာ … သူတို့ အမျိုးသားရေးကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ အရိုးခံစိတ်တစ်ခုပဲ ရှိတယ် … အလိမ္မာ မရှိကြဘူး … ပရိယာယ်မရှိကြဘူး … ကျွန်မသာဆိုရင်တော့ အဲသလိုမလုပ်ဘူး … ကိုယ်လုပ်စရာမလိုဘဲ သူ့စားရိတ်နဲ့သူသွားအောင်ပဲ လုပ်မယ် … ဒါပေမယ့် ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ … ” ကျွန်မတို့ သွားနေကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်စေတဲ့ အတွက်ရော … လူ့အသက်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ရော မုန်းတယ် … ပြီးရင် သူတို့တွေ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်မိသွားတာမို့လို့ သနားတယ် … နောက်ဆုံး အကာအကွယ်မရှိတဲ့ကျွန်မတို့တွေအတွက် သူတို့တွှေကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်မိတယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ် … ” စာသားလေး က မျက်ရည်တောင်လည်မိတယ် ရခိုင်သားတွေ၇ဲ. ရက္ခိတ ဆိုတဲ.စိတ်ကို ကြက်သီး မွေးညှင်း ထလောက်အောင်ဂုဏ်ယူမိတယ် ကိုယ်.လူမျိုးကို ဒီလို မှမကာကွယ်ရင် မြန်မာနိူင်ငံ ရဲ. ငါတို.ခြံစောင်.တွေ မကာကွယ် ရင် အားလုံးသော် တိုင်ရင်းသားတွေ ၀ါးမျို ခံရလိမ်.မယ် မြေမြိုလို.လူမျိုးမပျောက်ပါဘူး လူမျိုမှလူမျိုးပျောက်လိမ်.မယ်………ဒါကိုသတိထားမိကြရဲလား………..
မှန်တာပြောရရင် ဒီ Post ၊ MG မှာမတက်ခင် ၊
Face Book မှာ ကတည်းက ၊
ဖတ်ပြီးသား ၊ ကြိုက်ပြီးသား ၊ ထပ်တူ ခံစားပြီးသားပါ ။
အခု MG မှာထပ်တွေ့တော့လည်း ၊
ကြိုက်ပါတယ် ခံစားရပါတယ် လို့ မပြောမိရင် ၊
တာဝန် မကြေသလိုကို ခံစားမိတဲ့အတွက် ၊
ကြိုက်ပါတယ် ၊ ထပ်တူ ခံစားရပါတယ် လို့ ၊
” ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက
သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ ”
သမီးလေး / ညီမလေးရေ စိတ်မပူပါနှင့် ၊
ပရိယာယ် ရှိတာ မရှိတာတော့ မသိဘူး ။
မင်းမှာ အကိုတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ် ။
အေး အကိုတွေ အကုန်ကုန်သွားရင်တောင်လဲ ၊
အဘ တို့အရွယ် အဖေ / ဦးလေးတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ် ။
ဟုတ်တယ်။ အဘဖောပြောတာကို ထောက်ခံတယ်။ we are oneရေ…..ငါတို့ကနင့်ရဲ့ အစ်ကိုမောင်ဘွားတွေလို့ နင်ယုံကြည်ပေးပါ။ နင်လက်ခံပေးပါ။
အနောက်ဘက်က အမျိုးတွေအတွက်မှမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးအားလုံးအတွက်ပါ။
သည်postကို ၀င်ဖတ်တာ ရင်ထဲမှာနင့်နေအောင်၊ ကျင်နေအောင်ခံစားရပါတယ်။
အမျိုးတွေအားလုံး ကိုယ်၊စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ချမ်းသာကြပါစေ။
Ko Win ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ အခု ဆိုရင် ဒင်းတော့ ရဲ့ သရုပ်မှန် ကို အားလုံးလည်း သိလာ ကြပြီ.. ကျွန်မ တို့တွေ ဘယ်လောက်တောင် ကြိတ်ပြီးခံနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကို…